China 10 zvidimbu Doro / Hyamine Pukuta fekitori uye vagadziri | Zhongrong
Ruoko Sanitizer TECH-BIO
Vana Vanoshandisa Ruoko Sanitizer TECH-BIO
50ml Ruoko Sanitizer TECH-BIO
500ml Kuchenesa Ruoko Sanitizer TECH-BIO
OEM Ruoko Sanitizer
75% Doro Disinfectant TECH-BIO
50ml 75% Doro Disinfectant TECH-BIO
500ml 75% Doro Disinfectant TECH-BIO
2.5L 75% Doro Disinfectant TECH-BIO
75% Doro Disinfectant muIBC / Drum
Disinfection Pukuta TECH-BIO
1 chidimbu Doro / Hyamine Pukuta
Zvidimbu gumi Doro / Hyamine Pukuta
Zvidimbu makumi mashanu Doro / Hyamine Pukuta
150 zvidimbu Doro / Hyamine Pukuta
Kemikari Raw Zvinhu
50ml Ruoko Sanitizer Gel TECH-BIO
500ml Mositure Ruoko Sanitizer Gel TECH-BIO
Kuita kwebhakitiriya kwechigadzirwa ichi kunoedzwa zvinoenderana neyakajairwa nyika neyakafanira muyedzo wekuyedza. Iyo inoshanda sterilization mwero wechigadzirwa ichi kurwisa Escherichia coli, Staphylococcus aureus uye Candida albicans inogona kusvika 99.99% pasi pemamiriro ekuedzwa kweminiti imwe. Mhedzisiro yacho ndeyekutarisa.
10 Piece Rongedza pamusoro 75% Adoro Wipe
Yakakurudzirwa kavha bhegi kutaurwa:
Kureba * upamhi * kukwirira 160 * 95 * 15 mm
Iyo logo ye TECH-BIO 、 Chinese & Chirungu zita
Inogona kuchenesa ganda zvinyoro nyoro neunyoro magadzirirwo. Iyo yakakodzera kupukuta maoko, ganda, nezvimwe, kuchengetedza hutano hwemhuri chero nguva munzvimbo dzakasiyana.
Chigadzirwa zita:: 75% Doro Inopukuta
Chinhu chikuru: 75% Doro （V / V 、 water Yakanatswa mvura 、 Spunlace nonwoven
Shandisa rangeInokodzera kupukuta maoko, kumeso, rakasimba ganda uye zvakajairika pamusoro pezvinhu. Dzivisa kuishandisa pameso, maronda uye zvimwe zvikamu zvakaoma.
Usage: Bvarura chinamirwa. Chishandise mushure mekudzima uye chisimbise munguva. Nguva yekuita kwemaoko ndeye -1min, nguva yekuita yeganda rakasimba ndi55min, uye nguva yekuita yezvinhu zvakajairwa i30min.
Yambiro: Chengetedza munzvimbo inotonhorera uye yakaoma. Zvekushandisa kwekunze, nzvenga muromo uye bata nemaziso. Inopisa, dzivisa kupisa kwakanyanya kana sosi yemoto. Vanhu vane allergiki nedoro vanoishandisa nekungwarira. Zvichengetedze pasingaonekwi nevacheche nevana vadiki. Ndokumbirawo uise mumarara emarara mushure mekushandisa. Usasvete muchimbuzi kudzivirira kuvharika. Vacheche vari pasi pemakore matatu havafanirwe kushandiswa.
Hutano mureza:: GB 15979
Executive mureza:GB / T 27728-2011
Chigadzirwa magadzirirwo:200mm X 150mm
Zvemukati zvemukati: 10pcs
Nguva yekushanda: Makore maviri
Kugadzirwa batch nhamba: Ona kurongedza
Yakatemerwa zuva rekushandisa: Ona kurongedza
Mvumo naZhongrong Technology Corporation Ltd.
Wedzera: Kwete. 1, Changqian Road, Fengrun Dunhu, Tangshan Guta, Hebei Province
Runhare： 021-64700127 0315-8072728
Mugadziri: Jinhua Changgong Kuchenesa Zvigadzirwa Co, Ltd.
Wedzera:Ditian Rinoshanda Zone, Xiaoshun Town, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province
Rezinesi rehutsanana No: (Zhejiang) Chitupa chehutsanana (2018) Kwete 0071
Kavha uye zvifambiso
Pashure: Zvidimbu makumi mashanu Doro / Hyamine Pukuta
Zvadaro: 150 zvidimbu Doro / Hyamine Pukuta
Kero: Room1602 Vanke Center, No.970 Nanning Rd., Xuhui Dunhu, Shanghai 200235 （SH Hofisi）
Runhare: +86 21 6470 0198